Apple Inoburitsa WatchOS 6.1.3 Kugadzirisa Matambudziko Akakomba | IPhone nhau
Apple Inoburitsa WatchOS 6.1.3 Kugadzirisa Nyaya Dzakakomba
Apple ichangoburitsa vhezheni itsva ye WatchOS 6.1.3 uye mariri zvimwe zvikanganiso zvakakosha zvakaonekwa zvinogadziriswa. Zvinotaridza kuti ichi chigadziriso chinouya kubva kumatambudziko nechombo chinonyevera nezve kujairika kurova kwemoyo uye zvimwe zvikanganiso zvidiki.
Uye zvakare, Apple yakatanga zvakare mhando nyowani yeWOSOS 5.3.5 kune avo vashandisi vasingakwanise kumutsiridza iyo iPhone kune iyo iOS 13. Pasina mubvunzo izvi zvigadziriso zvinosvika zvisingatarisirwi uye shanduro nyowani dzaive dzisingatarisirwe kune vese vashandisi nhasi, asi kugadzirisa matambudziko nematuru akaonekwa akakosha uye zvinoita sekunge mune ino mamiriro ekuvandudza anga achidikanwa .
Iyo yapfuura watchOS 5.3.5 yekuvandudza yakaburitswa ingangoita mwedzi mina yapfuura saka isu tinofungidzira kuti munguva ino yakaonekwa matambudziko akagadziriswa. Muchiitiko chewatchOS 6.1.3, zvese zvinoratidza kuti matambudziko akaonekwa akakosha uye nekudaro iyo yekuvandudza inokurudzirwa nekukurumidza sezvazvinogona.
Chaizvoizvo mune yangu Apple Watch Series 4 Ini handicherechedze kukundikana kupfuura kwakanyanya bhatiri kunwiwa kupfuura zvakajairwa, asi ini ndinopokana kuti ichi chaicho chiitiko chekugadzirisa izvi. Chero zvazvingaitika, iyo vhezheni itsva yatovepo kurodha pasi zvakananga kubva kuWatch application ye iPhone yedu, muGeneral> Software kugadzirisa. Rangarira kuti iwe unofanirwa kuve neinenge 50% yekuchaja pane wachi uye uve nayo yakabatana nejaja panguva yekuvandudza maitiro.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Apple Inoburitsa WatchOS 6.1.3 Kugadzirisa Nyaya Dzakakomba
Ndanga ndichiedza kurodha pasi iyo yekudzokorora kwechinguva uye ini handikwanise
Pindura kuna eroman
Mushure mekuimisa, iyo bhatiri yekushandisa yakakwira mudenga.
Sekureva kwaKoo Apple ichawedzera kugadzirwa kweAirTags mukota yechipiri neyechitatu yegore rino